Tianjin Yilimi Plastic Products Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2017. Waa saaraha ku takhasusay cilmi baarista iyo horumarinta, wax soo saarka, iibinta iyo adeegga weelasha caaga ah ee kala duwan ee la tuuri karo, waxaana ka go'an in ay macaamiisha siiso alaab tayo sare leh oo baakadaha cuntada ah. . Shirkaddu waxay ku taal Tianjin Jinghai Aagga Horumarinta Dhaqaalaha, oo u dhow Dekedda Tianjin, saadka ku habboon xamuulka badda, waddo weyn, tareenada iyo xamuulka hawada.
Ilaa hadda, waxaan haynaa boqollaal nooc oo badeecado ah oo la heli karo si loo daboolo baahiyaha suuqa kala duwan, Iyada oo leh tayo aad u fiican, qiimo tartan ah iyo adeeg iibka ka dib, alaabadayada ayaa si weyn loo aqoonsan yahay oo lagu kalsoon yahay macaamiisha suuqa gudaha iyo dibedda.
Nidaamyada habraaca dalbashada caadiga ah iyo habraaca gaarsiinta, oo ay weheliso adeegga waqtiga ku habboon, waxay hubisaa in macaamiishu ay si degdeg ah u isticmaali karaan alaabadayada iyo adeegyadayada. Isku soo wada duuboo, annagoo ku tiirsaneyna alaabooyinka si xirfadeysan loo soo saaro, saadka iyo maamulka bakhaarrada oo aad u wanaagsan, awood wax soo saar oo ku filan, iyo wax ka qabashada suuqa oo hufan, waxaan siinay macaamiisha gudaha iyo kuwa ajnabiga ah adeegyo wanaagsan oo hufan.
Waxaan hirgelinnay xakamaynta tayada adag ee isku xirka kasta oo muunad diyaarinta-soo-saarka soo-saarka badan-baakaynta iyo gaarsiinta si loo daboolo heerarka sare ee macaamiisha. adeegyo gaar ah ayaa sidoo kale la heli jiray!
Yilimi wuxuu had iyo jeer u ololeeyaa fikradda ilaalinta deegaanka, ilaalinta iyo waxtarka sare leh, taas oo sidoo kale ah meesha laga bilaabo iyo dhammaadka cilmi-baarista iyo horumarinta alaabta kala duwan. Waxaa naga go'an inaan siino macaamiisha alaab caafimaad leh, deegaan saaxiibtinimo iyo wax ku ool ah, had iyo jeer laga bilaabo baahiyaha iyo danaha macaamiisha.
Yilimi wuxuu ilaaliyaa fikradda horumarinta shaqaalaha iyo shirkadu si wadajir ah u koraya, waxayna siisaa shaqaalaha jawi waxbarasho iyo shuruudo xirfadeed. Waxay samaysay jawi wanaagsan oo shaqaaluhu u danaynayaan horumarka shirkadda, shirkaduna ay danayso daryeelka iyo korriinka shaqaalaha.
Yilimi wuxuu had iyo jeer aaminsan yahay in tayada ay tahay nolosha ganacsiga, daacadnimadu waa nafta ganacsiga, shaqaaluhuna waa laf dhabarta ganacsiga.
Hadda, waxaan diyaar u nahay inaan furno suuqa adduunka. Si daacad ah u sug inaad hesho su'aashaada!